Diego Simeone oo afka furtay kaddib heshiiskii uu Antoine Griezmann ugu biiray kooxda Barcelona – Gool FM
(Madrid) 20 Luulyo 2019.Tababaraha kooxda Atletico Madrid ee Diego Simeone ayaa xaqiijiyay inuusan ka xanaaqin weeraryahanka reer France ee Antoine Griezmann, kaddib heshiiskii uu ugu wareegay Barcelona suuqan xagaaga.
Xiddiga xulka qaranka Faransiiska kula guuleystay Koobkii Adduunka 2018 ayaa adduun dhan 120 milyan oo euro ay Barcelona kaga soo qaadatay suuqan xagaaga kooxda ay ku xafiiltamaan Spain ee Atletico Madrid.
Simeone ayaa aaminsan in u dhaqaaqista Antoine Griezmann ay tahay tallaabo muhiim u ah xirfadiisa, isagoo xaqiijiyay inuusan marna ka careysneyn isaga, maadaama uu ixtiraamayo go’aankiisa shaqsiyadeed.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa shaaca ka qaaday hadalada Diego Simeone waxaana ka mid ahaa:
“Waxaan qadarinayaa waxa uu sameeyay Antoine Griezmann mudada 5-tii sano ee lasoo dhaafay, waxay ahayd xili muhiim u ah xirfadiisa nololeed”.
“Wuxuu ku biiray koox gaar ah sida Barcelona, waan la hadlay isaga wax badan, waana ku faraxsanahay ciyaaryahan kasta oo nala joogay”.
“Markii aan kula soo saxiixanay 25 milyan oo euros, ugu horeyn wuxuu ka ciyaarayay garabka, waxaan u sheegay inuu si qoto dheer u ciyaaro, si uu u dhaliyo goolal badan, wuxuu fahmay doorkiisa cusub wuuna ku guuleystay, taas ayaana iga dhigeysa mid faraxsan tababare ahaan, waan jeclahay isaga oo xiriir wanaagsan ayaan la leeyahay isaga iyo qooyskiisa”.